Efa misy amin’ny teny Shinoa ankehitriny ny tari-dalana “Blog for a Cause” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2019 4:44 GMT
“Mba hampahafantatra sy hanentana,” satria izany no tanjona; ary hilaza bebe kokoa ny mpanoratra ny Blog for a Cause! Mary Joyce::
Manazava ny fomba ahafahan'ireo mpikatroka mampiasa bilaogy ho anisan'ny hetsika manohitra ny tsy rariny manerana izao tontolo izao izany. Afaka manampy ireo mpikatroka amin'ny fomba maro ny bilaogy. Fomba haingana sy mora hananganana fisiana ao amin'ny aterineto, hampiely vaovao momba ny zavatra arovana, ary hikarakarana hetsika handresena lahatra ireo mpanapa-kevitra izany.